18 jir loo qabtay weerarkii shalay lugu qaaday tareen dhulka hoostii mara ee London | Somaliska
18 jir loo qabtay weerarkii shalay lugu qaaday tareen dhulka hoostii mara ee London
Wararka ka imanaya magaaladda London ee dalka Ingiriiska ayaa sheegaya in wiil 18 jir ah loo qabtay weerarkii argagaxiso ee maalintii shalay aheyd lala beegsaday tareenka dhulka hoostiisa. Madaxa booliska Neil Basu oo u waramayey taleefeyshinka Sky News ee London ayaa sheegay in qabashada 18 jirkaasi ay aad muhiim u leedahay dagaalka lugula jiro kooxaha argagaxisadda ah.
“Waan ku faraxsanahay hadda sida aan horumar u sameeynay, waxaana sii wadeeynaa kor u qadista ammaanka ee argagaxsiadda”, ayuu yoro Neil. Dhinaca kale ra’iisal wasaaraha dalkaasi Theresa May oo iyadana saxaafadda la hadashay weerarkaska dib ayaa sheegtay in dhamaan ciidankaammaanka ee qeybihiisa kala duwan sida booliska, meleterig ay ilaalo ka qaban doonaan goobaha muhiim ah .
” waa xal caqli gal ah oo ammaanka lugu sugayo inta ay baaritaanadda ay bar bar socdaan” ayey tiri May oo ka hadleeysay isku weerarkii shalay London lugu qaaday.
Qaraxa lala beegsadya tareen dhulka hoostiisa mara ee boosteejadda ama maxadada Parsons Green ee Fulham, ayaa waxaa uu dhacay abaarihii xilliga London 8.20 (Sideedii iyo labaatan) subaxnimo, waxaana ku dhaawacmay dad gaaray 29 ruux. Ma ahan markii ugu horeeysay ee London weerar noocaan ah ka dhaca, basle kooxda Daacish ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarkan.
Masjidka Stockholm oo calaamada naziga lagu sawiray
Aadaankii ugu horeeyay oo looga dhawaaqay Sweden